मानिसलाई किन निद्राको आवश्यकता पर्छ?
डा कपिलदेव उपाध्याय सोमबार, जेठ ५, २०७७, ०७:२८
सोधकर्ताहरुले किन कम सुत्नु हुन्छ? भनेर धेरै जनालाई प्रश्न गर्दा मुख्यतः तीन वटा यस्ता कारण दिइन्छ।
पढेको बुझ्न र सम्झनको लागि निद्रा आवश्यक छ। यसबारे केही प्राविधिक कुरा गरौ। सम्झिने तरिकाको कुरा गर्दा इमिडिएट मेमोरी (अरुले भनेको अहिले सम्झिने), सर्ट टर्म मेमोरी (पढेको, घोकेको कुरा २४ घन्टासम्म सम्झिने) र ( लामो समयसम्म सम्झिने) लङ टर्म मेमोरी हुन्छन्।
निद्रा पाचन क्रिया राम्रोसँग चल्न र शरीरबाट बाहिर फ्याँक्नुपर्ने पदार्थहरु फ्याँक्न, शरीरमा हर्मोनहरु उत्पादन गर्न र रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता (इम्युनिटी) ठिक राख्न आवश्यक पर्छ। मस्तिष्कमा रहेको पिट्युटरी ग्रन्थीबाट निस्कने ग्रोथ हर्मोन निदाएको बेलामा निस्किन्छ। यसको काम मांसपेसी बढ्न, हड्डी बढ्न र बोसोको पाचन क्रियामा काम लाग्छ। त्यस्तै पुरुषमा हुने टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन राम्रोसँग नसुत्नेहरुमा निकै कम उत्पादन हुन्छ र यसले रिप्रोडक्टिव हेल्थमा असर पार्छ। त्यसैले राम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक मात्रामा सुत्नुपर्छ।
- जोर्नीहरु दुख्ने विभिन्न किसिमका बाथरोग
- दम, खोकी र छातीसम्बन्धी रोग
- कुनै पनि दीर्घ रोग, दुख्ने र श्वास फेर्न अप्ठयारो हुने
- मानसिक तनाव
- चिन्ता रोग, डिप्रेसनलगायत करिबकरिब सबै खाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या
- जीवनमा आइपर्ने अप्रिय घटना
कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन तर निद्रा लाग्दैन:
- स्लिप एपनियाः निदाइरहेका बेला श्वास फेर्ने क्रम ढिलो ढिलो हुदै अचानक थोरै समय रोकिन्छ र व्यक्ति जाग्छ। निद्रा खल्बलिन्छ र यही क्रम दोहोरिन्छ। घुरेर सुत्ने व्यक्तिमा यस्तो समस्या हुनसक्छ।
- जिउ गल्ने र जाँगर नहुने
- कुनै कुरामा ध्यान एकत्रित गर्न नसक्ने
- मन वा मुड खराब हुने वा ठिक नहुने
- घर, स्कुल वा अफिसमा काम राम्रो गर्न नसक्ने
गहिरो निद्रा र सपना देखिने निद्रा दुवैको आफ्नै महत्व छ। निद्राले मस्तिष्क र शरीरलाई रिचार्ज गर्छ, स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउँछ। पढ्ने र सिक्ने क्षमतालाई बलियो पार्छ, अनेकौ रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढाउँछ र सहज ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। निद्राले सात÷आठ घन्टाको संसारिक क्रियाकलापबाट मुक्त गर्छ र सानो छुट्टी मनाए जस्तै मन नै आनन्दित भएको अनुभव गराउँछ। शरीरको सुन्दरता र चमकलाई पनि यसले कायम राख्छ।
त्यसैले निद्रालाई सकेसम्म बढी प्राथमिकता दिनुस्। आनन्दले सुत्न चाहन्छु तर कसरी ? भन्नुहोला। स–साना बच्चाहरु सुतेको हेर्नुस्, बालबालिका सुतेको हेर्नुस्। निश्चिन्त भएर सुत्नुस्।
पूर्वीय दर्शनअनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माद्सर्यले हामीलाई सताइरहेका हुन्छन्। भनिन्छ, हाम्रा विचारहरु मित्र पनि हुन सक्छन् र सत्रु पनि। आफूलाई दुःख दिने विचार त्याग्नुस्।
(डा उपाध्याय वरिष्ठ मनोचिकित्सक हुन्)